पाँच महिनादेखि भैरहवा भन्सार आयातमा गिरावट, लक्ष्य पार गर्न सकस - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७९, बुधबार १२:०१
♦ मोहम्मद हबिब
४ जेठ, भैरहवा । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लागु गरेको प्रतित पत्र र विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको पूर्ण बन्देजका कारण भैरहवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्य पार गर्न सकस भएको छ । भन्सार आयातमा भएको कडाइले भैरहवा भन्सार कार्यालयमा लगातार पाँच महिनादेखि आयातमा गिरावट आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को सुरुवातबाट राजश्व संकलनमा लक्ष्य पार गर्दै आएकोे कार्यालयले गत पुसबाट लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । गत ५ पुसबाट लागु हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैकले १८ वटा शीर्षकका विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा अनिवार्य प्रतित पत्र (एल.सी.) खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयातमा कमि हुदै आएको हो । लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसक्दा यस्को प्रभाव वार्षिक लक्ष्यमा पर्ने देखिएको छ ।
कार्यालयले गत पुसमा ८७ दशमलव १३, माघमा ७१ दशमलव ५८, फागुनमा ७६ दशमलव ४५ , चैतमा ७३ दशमलव ९६ र बैशाखमा ७४ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।
नेपालमा १६ अर्बभन्दा बढीको फलफूल भित्रियो, कुन देशबाट कति ?
सुन आयातमै बाहिरियो साढे २८ अर्ब, कहाँबाट आउँछ नेपालमा सुन ?
नेपालमा एघार महिनामा ३८ अर्बको मोबाइल भित्रियो, कुन देशबाट कति ?
नेपालमा एक खर्बभन्दा बढीको भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल भित्रियो